Mid ka mid ah Casharka Muhiimka ah ee aan ka bartay dib u eegida daraasado adeegyo martigelinaya waa in aqabta websaydhka wanaagsani aysan walgeed noqon martigaliyaha webka saxda ah.
Sababtoo ah noocyada kala duwan ee网站-yada waxay yeelan doonaan baahiyo kala duwan.
Qaar ka mid ah martigeliyeyaasha shabakadaha qaarkood waxay ku fiicnaan karaan meelaha qaarkood-sida xawaaraha iyo tignoolajiinka ugu dambeeya halka kuwa kale ay xooga saaraan inay bixiyaan adeeg deggan oo deg。一个 "Martigeliyaha Webka Wanaagsan" mar walba ma dammaanad qaadaya 100％isticmaalayaasha 100％qanacsanaanta.
Tani waxay si gaar ah u tahay marka a timaado website-ka ganacsiga martigelinta。 Anigoo ah ganacsade ganacsade naftayda-Anigu run ahaantii waan fahamsanahay sababta ay ganacsiyada badanaa u taxaddaraan oo ay ka doortaan martigooda webka。 Waxaad u baahan tahay inaad ku dhajiso adeegga saxda ah qiimaha saxda ah iyo tayada saxda ah。马丁达·韦伯卡 "乌干达人" 马诺坎卡多尔门达沙达乌格菲坎.
Ka dib markii la qiimeeyo dhammaan shabakadaha internetka ee fiican，wathaan hoos ugu dhacay liiska shirkadaha si fiican ugu habboon baahiyaha ganacsatada yar yar.
虚拟主机Qiimaha GelitaankaSSH Helitaanka通过电子邮件发送电子邮件吗？免费SSL证书。SocdaalkaSafarka ee Bilaash ahDhismaha Raadiyaha fudud
InMotion托管 $ 3.99 /月 哈 哈 Gawaarida SSL & 艾恩加密 哈 粗体网格
苏达文塔 $ 0.80 /月 Haa（Premium ++） 哈 内部（Premium ++） 哈 内部
苏伊布索 $ 29.00 /月 玛雅人 玛雅人 内部 玛雅人 内部
SiteGround $ 3.95 /月 哈 哈 亚恩·伊斯库·代诺 哈 eb
服务器间 $ 5.00 /月 哈 哈 自动SSL 哈 内部
A2托管 $ 3.92 /月 哈 哈 Gawaarida SSL & 艾恩加密 哈 内部
达鲁拉哈 $ 10.00 /月 哈 玛雅人 亚恩·伊斯库·代诺 Goobta koowaad kaliya 玛雅人
蜡 $ 8.50 /月 玛雅人 玛雅人 内部 哈 蜡
1 Marti-gelinta Ganacsiga Yaryar ee ugu Yar 2020-Dib-u-eegis & 塔罗比辛诺
1.3 3. Soi iibso
1.7 Xaaladda Daraasadda＃2：Hadafka Xogta ee博客+ Ganacsi网站
1.8 Xaaladda Daraasadda＃4：Xogta La Xidhiidha ee Dukaanka电子商务/在线
2 回顾：Isbarbardhig Sare Ganacsiga Yar ee Ganacsiga
Marti-gelinta Ganacsiga Yaryar ee ugu Yar 2020-Dib-u-eegis & 塔罗比辛诺
Waxaan hadda qodxi doonaa mid kasta oo ka mid ah adeegyadan martigelinta ganacsiga。 Si looga dhigo dib-u-eegiddaydu inay noqdaan中蜡塔尔leh oo caawimaad leh，sathaan gelin doonaa diiradda dheeraad ah astaamaha muhiimka u ah ganacsiga，sida waxqabadka martigelinta，astaamaha-ibibaib，.
InMotion Hosting-托管业务wuxuu ka bilowdaa $ 3.99 / mo> Riix Halkan Si aad u dalbato hadda.
Waxqabadka serverka adag-Waqti fiican（99.95％）iyo waqtiga颌骨（<450ms）
Sicir-dhimista Ug Weyn ee Qorshaha Martigelinta La Wadaago-凯桑·伊拉50％
Diiwaangelinta域名ee bilaashka啊，Shahaadada SSL iyo kaydinta maalin kasta
Talo：Qorshaha InMotion Waa Mid u fiican ganacsiga yaryar / kuwa dhexdhexaad ah?
Ganacsiyada cusub iyo kuwa yaryar-Bilow InMotion Power Plan Plan-ee $ 5.99 / mo，macaamiisha waxay ku martiqaadi karaan xayirada 6 oo leh SSL lacag la’aan ah oo idil oo idil iyo dhamaan sifooyinka muhiimka.
Waxqabadka serverka adag-Waqti fiican（99.95％）iyo waqtiga颌骨（<600毫秒）
Si aad ah u jaban si aad u bilowdo，Qorshaha Guud ee Halista ah ayaa ka bilowda $ 0.80 /月
Dhismaha网站-ka dhejinta iyo dhajinta（oo lagu sameeyo guriga）si fudud loo abuuro网站
Noocyada ammaanka ee dheeraadka ah，magaca bilaashka ah，iyo kaydinta maalin kasta ee qorshaha Premium iyo Qorshaha Ganacsiga
Haddii aad u baahatid waa bog sahlan oo lagu sawiro ganacsigaaga（barta internetka），ka dibna ha eigin wax dheeraad ah-Martinger waa颚木abadaada。 $ 0.80 /月Qorsho Hal Xun waa kan ugu jaban（laakiin lagu kalsoon yahay）ganacsiga martigelinta ee aad marwalba heli karto.
Xasuusnow，si kastaba ha ahaatee，in aad heshid，tasta aad bixiso-蜡笔小新汽车，shaqo aan xadidneyn，sida naqshadda汽车，shaqo aan xadidneyn，iyo SSL lacag la’aan ah，ayaa lagu heli karaa oo keliya qorshooy。 Waxaan kugula talin lahaa inaad tagto（ama kaddibna dib u cusbooneysiiso）macaamiilaha martigelinta haddii aad si dhab ah uga ganacsaneyso ganacsigaaga.
3. Soi iibso
Diyaarso，Qaabka Ug Caansan E-holka，Wuxuu Awood U leeyahay在卡巴丹杜卡玛达在线800,000 EE 2020> 里克斯·哈尔坎·西阿达·达巴托.
Soi iibsashada aasaasiga ah waa aasaas wanaagsan oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar ee dhexdhexaadka ah.
Soi iibsashadu waa，si daacad ah，pricier ka badan inta badan dhismayaasha kale ee suuqa。 Hase yeeshee，sidoo kale waa mid aad u go’an ekaabta eCommerce taas oo noqon karta mid aad u weyn oo loogu talagalay ganacsiyada，gaar ahaan marka loo ee eego qaabka isdhexgalka POS。 Qaab dhismeedka qiimaha waa mid fudud oo kaliya waxaad u baahan tahay inaad isku xirto ganacsigaagu u baahan yahay mid sax啊.
Muuqaal圆锯的EE Bogga SiteGround> Riix Halkan Si aad u dalbato hadda.
SuperCacher lagama helayo qorshaha aasaasiga ah ee wadaagga ah（启动）
Qorshaha Bilowga-$ 3.95 / mo
Qorshaha GoGeek-$ 11.95 / mo
Waxaa aasaasay，Michael Lavrik iyo，John Quaglieri，InterServer，新泽西州ah oo ku jirtay，ciyaar tan iyo，1999年.
Ugu horreyntii wuxuu bilaabay inuu noqdo xisaab furan oo loo yaqaan’virtual-account re-seller’，bixiyaha martigeliyaha ayaa koray sannadihii 17 ee hore waxaana uu hadda ka shaqeeyaa kuo xaruma yahead yauhea yahea yauxa yauxa yauxa yauxa yauxa yauxa yauxa yauxa yauya yauxa yauxa yaua yaxo kuaexa yaxa kuaxa kuaxa kuax的帐户.
Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan InterServer waa wax qabadkooda adag ee server-ka，soo dirista ballanqaad ee damaanad qaadka啊，iyo qiimaha isqorista。 Shirkadda waxay ballanqaadeysaa inaysan waligood kor u qaadi doonin qiimahooda inta lagu jiro cusboonaysiinta isla markaana ay ku sii hayn doonaan adeegsiga kombuyuutarkooda ka yar 50％ka faa’ideyafafaakaahdaah a。 Sidoo kale，muujinta Iimeylka cusub ee Dammaanad-qaadka E-maylka wuxuu hubiyaa emayllada ganacsi ee muhiimka ah ee aaddiray inaysan ku xayiran doonin sanduuqa qashin-qaateyaasha qaatahaha.
Taageero lamat-talin ah oo nool
Waxqabadka weyn ee TTFB ee ka hooseeya 550毫秒
Doorashada 4 meelo kala duwan oo服务器啊
Xitaa doorashooyin daheraad ah：VPS，daruurta，iyo martigalinta martigelinta
Talo：Waa maxay qorshaha A2?
Qiimaha A2 Hosting Waxuu daboolayaa baahiyo ballaadhan sababtoo ah tirada badan ee noocyada qorshaha ee ay leeyihiin。 Ganacsatada yaryar waxay ka bilaabi karaan mid ka mid ah qorshayaashooda la wadaago oo miisaamaya illaa $ 3.92 bishiiba。 Marka Laga Soo Tago，Marka mugga socodkaagu uu kici karo waxaad si sahlan uga gudbi kartaa qorshaha si aad u qorsheyso.
Sawirada Meelaha Daruura Bogga> 里克斯·哈尔坎·西阿达·达巴托·哈达.
Nidaamka rakibida fudud ee WordPress，PrestaShop，Drupal，iwm.
Mawaadlaha la qiimeeyo maaraynta maareynta maaraynta（daruuraha martigelinaya sida hooseeya $ 10 / mo）
Bixi intaad aadeyso-卡莉亚·拉格（Kaliya lacag ku）
Cadaalad-Bilowga iyo horumariye saaxiibtinimo leh直观的用户界面
Talo：Qorshaha ugu fiican ee dariiqooyinka daruuriga ah ee ganacsiyada yaryar?
Wixii qorshe ah gelitaanka Cloudways kasta wuu u fiican yahay ganacsiga yar yar。 Waqtigan xaadirka qoraalka，Cloudways Digital Ocean iyo Cloudways Vultr waxay ku socdaan qiimaha ugu jaban。 Wixii $ 10 / mo iyo $ 11 / mo啊，waxaad ka heli doontaa 1 GB服务器服务器RAM iyo kaydinta 25 GB si aad u martigeliso shabakadahaaga ganacsi ee yar.
索米尔·巴迪斯Wix Home> Guji si aad u dalbato hadda.
Iyadoo是22％的suuqyada suuqa ee ganacsadaha网站-yada tartanka tartanka，Wix waa mid ka mid ah eeyaha ugu sarreeya。 Waxay ku jirtay ganacsi muddo ka badan toban sano waxaana ay dadka istmaala fursad u tahay inay abuuraan bog Internet oo cajiib ah oo dhowr ah。 Waa Hagaag，Ladan yaabee in Badan，Laakiin Taasi Waa Fikrad guud-Fudud!
Tifatiraha muuqaalka waxaa loogu talagalay inuu qof walba u oggolaado，xitaa kuwa aan lahayn aqoonta codka ah si ay si degdeg ah ula qabsadaan。 Qeybinta boggaagu wuxuu noqon karaa mid sahlan sida xulashada template iyo wax ka bedelida ala Lego style.
Tifaftiraha aasaasiga ah wuxuu fursad u helayaa蜡kasta oo ah goobta caadiga ah ee loo baahan yahay，laakiin haddii aad leedahay shuruudo dheeri ah oo aan laga helin halkaas，Wix蜡质leedahayaad ana oo ana ua ane ua ane ane ou ane ane.
Martigeliyaha ayaa la wada socda iyadoo la adeegsanayo doorka Wix ee dhiska goobta，markaa asal ahaan waa dukaan hal-joog ah oo loogu talagalay abuuritaanka shabakadda！ Tani Waxay si gaar ah faa’iido ugu leedahay ganacsiyada yaryar ee kartidooda aasaasiga ahi aysan ku jirin teknolojiyadda.
Qorshayaasha蜡 & 齐马哈
组合-$ 8.50 / mo
无限-$ 12.50 / mo
电子商务-$ 16.50 / mo
VIP-$ 24.50 / mo
哈尔坎·卡·阿赫里索·蒂莫西ee qoto-dheer Wix falanqaynta.
Kuwa ugu fiican ee loogu talagalay bogagga internetka ee ganacsi：Soo dhaweynta，Wix，A2托管.
Xaaladda Daraasadda＃2：Hadafka Xogta ee博客+ Ganacsi网站
Julie Cortana waxay bilawday eyga weyn eeyaha dabiiciga ah daaweynta dukaanka internetka si ay siiyaan dadka istmaala fursad ay ku siiyaan xayawaanka rabaayad gaar ah。在La iibiyo daaweynteeda中，互联网上的蜡像与bahan tahay一样，liis gareyso或iibiso iyada或loo marayo goobteeda.
Si taas loo sameeyo waxay u jeestay Wix。网站-在dhisto的wuxuu u oggolaaday上，Bone Zappetit或leh xirfad farsamo或yaryar halka Suuqa App-ka y gacan ka geysatey awoodda barta blogga iyo电子商务无头甘蓝oo ay ubaahantahay在a suuqa gasho.
Kuwa ugu fiican ee loogu talagalay bogagga shabakadda ganacsiga：InMotion托管, 服务器间，SiteGround.
Xaaladda Daraasadda＃4：Xogta La Xidhiidha ee Dukaanka电子商务/在线
Tusaalaha dukaanka internetka-日本对象商店（伊洛）
日本，日本，对象是商店，日本，日本，日本，日本，日本。 Si kastaba ha ahaatee，waxay kaloo leedahay alaab dhaqameed oo iib ah，sida和服，浴衣iyo Obi Belts.
在goobta cusubi aysan ahayn mid la yaab leh中，laakiin waxay ku siin kartaa fikrad wanaagsan oo ku saabsan sida ay u weyn tahay（oo lagu daray dukaanka eCommerce）Waxaad ku dhisi kartaa dukaanka。 Qurux badan oo qurux badan iyo isticmaal wanaagsan oo isku-dhafan oo muuqaal ah oo lagu qeexay qaab-dhismeed sahlan，日本对象商店waa nadiif ah oo qallafsan.
Tilmaamaha Khidmooyinka Ganacsiga ee Ganacsiga（2020年）
InMotion Hosting（oo leh Lacag dhimis gaar ah）：$ 3.99 / mo-$ 13.99 / mo
InMotion Hosting主持人蜡笔小女孩martigelin aad loogu kalsoonaan karo oo qiimo macquul ah，taas oo noqon doonta meesha macaan ee ganacsiyada。 Hordhaca Qorshaha（wuxuu bilaabmaa $ 3.99 / mo）wuxuu la yimaadaa域bilaash ah，SSL bilaash ah，iyo karti aad ugu martigelin karto域2> Riix Halkan博客和InMotion托管.
Xoghayaha：$ 0.80 / mo-$ 3.45 / mo
Hostinger wuxuu leeyahay mid ka mid ah qorshayaasha martigelinta ugu raqiisan suuqa。 Lagu qiimeeyo $ 0.80 / mo，Rugaha Shirkadda Hal Meey waxay kuu oggolaaneysaa inaad marto hal网站oo leh 100GB带宽。 Shakhsi ahaan waxaan qabaa in Hostinger uu ugu fiican yahay ganacsiyada doonaya inay martigeliyaan网站fudud oo fudud Riix halkan si aad u booqato marti-qaadaha.
回顾：Isbarbardhig Sare Ganacsiga Yar ee Ganacsiga
Horumarinta ganacsigaaga internetka？ Halkan Waxaa Ku Qoran akhrisyo dheeraad ah.
Sida loo bedelo网站-kaaga HTTPS（rakibidda SSL）
Sida loo hirgaliyo网站-kaaga hoyga cusub ee cusub